Ohere ndị ọrụ maka ndị India na UAE & Visa enyere
Mee akwụkwọ maka ọrụ na Dubai - Strategies na Research maka Ọrụ na UAE
Ọrụ Ndị India na UAE
Ọ na-adị mma ịkwaga na UAE
Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE, dị ka eziokwu, bụ nnukwu ego maka ndị njem India. Ọnọdụ akụ na ụba UAE na-eto ngwa ngwa n'ihi ya ohere ọrụ. Ọ bụrụ na ịnọ na India ma na-achọ ọrụ, Arab ụwa bụ nnukwu nhọrọ. Ọ dị mfe karị ịchọta ịchọta ọrụ na India karịa ka ị nwere ike iche n'echiche. Ọtụtụ ndị na-eme ihere itinye akwụkwọ maka mba ọzọ n'ihi ngwa agha na egwu amaghị ama.
Na nso nso a, onye India gọọmentị abịapụtala usoro ọhụrụ ọbụghị ma hazie aka kama nye aka chekwaa nchekwa nke ụmụ amaala ya mgbe ha na-arụ ọrụ na mba ofesi. Otu n'ime ebe kacha dị mkpa maka ndị ọrụ na UAE. Ọ bụ ama ama n'akụkụ ụwa niile dị ka ala nke ohere maka ndị ọkachamara na ngalaba niile.
Kemgbe mmalite nke afọ, a chọrọ ndị India ka ha debanye aha na ikpo okwu ntanetị nke gọọmentị na-akwado tupu Ha na-aga UAE maka ọrụ. Nke a metụtara ndị na-ejighi paspọtụ ECR na-aga njem na-arụ ọrụ. Ọ bụ nanị ndị India ole na ole na-aga UAE maka ịga ma ọ bụ ezumike, visa kachasị mfe bụ maka ọrụ. Gọọmentị chọrọ nwa amaala India ọ bụla nwere mmasị ịkwaga UAE iji mezue usoro ndebanye aha ọ dịkarịa ala 24 awa tupu oge ọpụpụ ahụ n'ezie. Ebumnuche bụ ichebe ọdịmma na ọdịmma nke Citizensmụ amaala India mgbe ha na-arụ ọrụ ná mba ọzọ.
Ịchọta ọrụ na UAE
UAE bụ ahịa ọrụ onye ọrụ ha nhata. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere obodo gi. N'ezie, mpaghara Arab nwere mmekọrịta chiri anya na kọntinent India si na ya mere nhazi akwụkwọ dị mfe ma ọ bụrụ na iru eru maka ọrụ. Dịka ụmụ amaala n'ofe ụwa niile, ị ga-eme nyocha n'ọtụtụ ohere dịnụ ma mee ngwa ndị dabara adaba maka ọdịmma gị.
Ọ dị mfe n ’India karịa ọtụtụ akụkụ ụwa ndị ọzọ n’ihi ochichi iji nyere ndị amaala na-enweghị ọgụgụ isi aka ịchọta ọrụ n'ime na n'enweghị kọntinent ahụ. Onu ogugu ndi India so na ndi kasi n’uwa. Mụ na ndị okenye na-eme akụkụ nke nnukwu ọrụ, ole na ole n'ime ndị a nwere ọrụ kwụsiri ike ya mere na-akpata ego a na-apụghị ịtụkwasị obi.
Ama m na ị ghọtara ọnọdụ akụ na ụba nke India n'ihe metụtara usoro ego ụlọ. Ọ bụghị ihe nzuzo ma ọ bụ ihe ihere nye gọọmentị; ndi ochichi India aputaputara nke oma iji nyere ndị amaala ya aka ịchọta ọrụ ná mba ọzọ na isi mmalite dịka UAE. N’ezie, nke a na - akwalite GDP nke mba ha. Ọ bụ atụmatụ nke gọọmentị mba na-eme ka ọ dịrị ndị India mfe ịchọta ọrụ na UAE.
Ọ dị mfe ịhazi visa ụmụ akwụkwọ si India na UAE. Ego ndị metụtara njem ụmụ akwụkwọ dịkwa obere. Ya na-ekwe gị nkwa na UAE. Ebumnuche, na nke a, bụ ịtọ ụkwụ na mba ahụ. Can nwere ike ịmụ akwụkwọ maka 4 afọ ma ọ bụ ọnwa ole na ole ka ị na-achọ ọrụ. Site na onu ahia di elu na UAE, i nweghi ike igbaghara oru; ma ọ bụ ihe efu ma ọ bụ ọkachamara dabere na iru eru gị.
Nkuzi akwukwo bu ihe enyemaka iji nyere gi aka ije obodo a. Imirikiti ndị ọrụ na UAE ga-enyere gị aka ịhazi akwụkwọ ikike ọrụ nwa oge. Ọ bụrụ na ijisie ike inweta ọrụ ahụ ogologo oge, akwụkwọ ikike ahụ ga-agbatịkwu ma kwụsị ịdịgide adịgide. Inweta amaala na UAE bụ nnukwu ihe ịga nke ọmamana ị ga - enwe ndidi ma kwekwa omume gị. Thekwesiri inweta ntụkwasị obi n'etiti ụmụ amaala; ntụkwasị obi dị mkpa na omenaala Arab.
Omenala ndi India na ndi Arab nwere myirita ya mere na mmekorita di mfe n'etiti ndi obodo na emeputa omenala abuo a. Shouldkwesịrị iji mmekọrịta siri ike nke dabere na okpukpere chọta ụdị ọrụ ọ bụla. Ị kwesịrị nwee obi ghe oghe mgbe ichoro inweta oru na UAE. Ọtụtụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-achọ ka ha were ọrụ, nyochaa, ma nwee ntụkwasị obi na ntụkwasị obi tupu ha ekenye ọrụ dị iche iche na usoro ọrụ ụlọ ọrụ. Nke a metụtara akụkụ niile nke azụmahịa.
Jiri oghe ebum n’obi gị mee ya, ị ga - enwe ike inweta enwetara site n’aka enyị ma ọ bụ onye ikwu nke otu onye ọrụ nọ na India. Tokwaga na UAE na visa visa ọrụ esighị ike, mana nke mbụ, to ga - arụ ọrụ na ịchọta ọrụ kwesịrị ekwesị. Livingkpụrụ obibi ndụ na mba Arab dabere n’obodo ị ga-ebi.
Ka o sina dị, ị kwesịrị ibu ụzọ na-achọ ọrụ, ndị ọzọ ga-agbaso.
UAE bụ onye isi ala; onye ọ bụla ga Were ohere iji gaa Dubai ọbụlagodi maka otu izu ụka. Mpaghara Arab na-etolite ngwa ngwa nke pụtara ọtụtụ ohere maka azụmaahịa na ọrụ. Ọ bụrụ n’inwere usọ ọ bụla, ị nwere ike ịchọta ezigbo ohere ọrụ na Dubai. Thegwọ ọrụ nke Dubai na-adọrọkwa mmasị; na mgbakwunye, ụgwọ ụlọ na ịba uru dị oke ọnụ ala karịa mba ndị ọzọ nọ n'isi ụwa. Nchikota nke mmanu mmanu na Ọdịbendị Arab na-eme ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka ndị India n'ihi nghọta dị n'etiti ọdịnala abụọ ahụ.
Enwere m ike ịchọta ọrụ? - Ohere ọrụ maka ndị India na UAE?
Dubai nwere ọrụ aka dị ala ma na-achọkarị ndị ruru eru iji mejupụta ọnọdụ a. Ndị obodo ahụ bara ọgaranya n'ihi mmanụ ma enweghị nsogbu ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ma ọ bụrụhaala na azụmahịa na-agba ọsọ dịka ha tụrụ anya. Naanị okwu banyere ịchọta ọrụ na Dubai bụ njikọta nke omenaala. Ndi ala Arab siri ike na nkwenye ha, iwe ga ewe gi iwe ma o buru na i mee ihe ozo; n'agbanyeghị ị nwere ike ịkekọrịta ma ọ bụ kwado nkwenye ha, ha na-atụ anya ka ị mee ihe kwekwere nkwenye ahụ. Ọ dị mma ịtụle na ịnọ na obodo ha ọbụlagodi, ha bụ ndị were gị n'ọrụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ịma aka maka ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na Dubai, Ndị India ka etinye nke ọma n'ihi agwakọta nke ọdịbendị. Okpukpe dị iche iche nke okpukpe ndị a na-eme ka ọ dịrị ha mfe ibikọ ọnụ. Gaghị enwe nsogbu dịka onye India soro ndị Arab na-eme. Ndi India kwenyekwara na ụkpụrụ ya, nke di nkpa maka ndi Arab. Ha nwere nghọta nke ịdọ aka na ntị dịka ndị India.
Ọ bụ ihe doro anya kpatara na mpaghara abụọ ahụ nwere mmekọrịta chiri anya. Nghọta nke ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-eme ka ha bụrụ ezigbo enyi. Y’oburu na i bu ndi oru ajuju ndi nwere asusu di otu a ị ga-enwe uru karịa ihe ndị ọzọ n'ihi mbido gịn. Ọ bụ ezie na enwere ike ịkatọ nke a n'akụkụ dị iche iche, ndị na-ahụ maka ọrụ Dubai nwere mmasị na ikike ya.
Ee, ị nwere ike ịchọta ọrụ na Dubai ma ọ bụrụ na ị si India.
Kedu ka m ga-esi nweta ọrụ ahụ?
Ohere inweta adịghị agwụ agwụ, ọdịghị mma dị n'aka gị, mana ị nwere naanị otu ọrụ, ịchọta ọrụ kwesịrị ekwesị maka gị. Dịka anyị kwuru, Dubai nwere ọtụtụ ọrụ ọrụ mana ọ bụghị ọrụ niile dabara na nkà gị, ahụmịhe gị, ma ọ bụ mmasị gị. Ọzọkwa, ịkwesịrị ịma ọwa mmiri na-akpọsa ụdị ọrụ ahụ na Dubai.
Y’oburu na i choro ima aka gi ma choro otu oru, i gha acho ime nnyocha banyere ulo oru ndi di elu na Dubai ma oburu na ha na ha na ego. Can nwere ike nwee obi ike ma ziga email oyi iji kpọsaa nkà gị. Enwere ike ịkọwa nke a dịka enweghị olileanya ma ọ bụ ntụkwasị obi. Nke ọ bụla pụtara na iji, o yikarịghị ka ị ga-enwe ohere ịnweta ọrụ mgbe ị na-akpọtụrụ. Ifyingkọwapụta ihe ndị na-amasị gị na Ebumnuche ọrụ bụ ụzọ dị mfe maka ịchọta ọrụ na Dubai mgbe Expo 2020 na-abịa.
Dubai bụ otu n'ime obodo kachasị elu nwere njikọ antanetị kwụsiri ike. Oru teknụzụ dị na Dubai na UAE dum na-eto ngwa ngwa. Imirikiti ụlọ ọrụ na-eji nyiwe dijitalụ na-arụ ọrụ ma ọ bụ tinye ndị na-azụ ahịa. Ilebara nke gi anya ịchọ ọrụ n’igwe ịntanetị dị mfe iji duru gị gaa ụlọ ọrụ na-arụ Dubai. Inwe ịnụ ọkụ n'obi na teknụzụ dijitalụ na-emekwa ka ọ dịrị ya mfe ịdọrọ onye were gị n'ọrụ. Contactkpọtụrụ ndị nwere ike ịrụ ọrụ na Dubai site na email ma ọ bụ site na ọwa ozi na weebụsaịtị ma ọ bụ aka na-elekọta mmadụ na-emetụta mkpebi ọrụ ha. Ndị Arab ebe a nwere anụrị maka teknụzụ na igosipụta ịdị ike gị ga - akpali mkpebi ha.
uru nke arụ ọrụ na Dubai
Dịka onye India, nke a ga-abụ ohere ịgbanwe ndụ maka nke onodu aku na uba di elu na Dubai. Ogo ndu ya di elu dika aturu India, mana onu ahia a ka di ala. Ratestụ ụtụ maka ndị enyi; a na-ahazi ụgwọ ịba uru Ejiri elektrọniki na ọnụ ahịa ihe ụtọ ana-achịkwa. Wagegwọ ụgwọ na Dubai dịkwa mma ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ akụkụ ụwa.
Cheta na inwere nnukwu ohere ma oburu n’India. Gọọmentị India na-akwadokwa ibu ọnụ nhazi nke visa na-achọ ọrụ na Dubai.
Ọrụ na Dubai maka Indias na UAE - "Ndụmọdụ doro anya". Ugbu a, ndị na-achọ ọrụ site na India nwere ike ibudata na ụlọ ọrụ anyị ugbu a. Ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-akpọ Dubai City Company ugbu a na-akwụ ụgwọ na UAE. N'iburu nke a n'uche, ìgwè anyị na-enyere ndị ọchịagha India aka ịchọta ọrụ na mpaghara Gulf. Dị ka onye na-achọ ọrụ ọhụrụ si India. Ị nwere ike iji ọrụ anyị ịchọta ọrụ nrọ na UAE. Karịsịa na Dubai, Abu Dhabi na Sharjah Cities. N'ikwu okwu n'ozuzu, otu ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ nwere mmasị na Dubai maka ndị India. Anyị na-enyekwa ọrụ ndị ọrụ gọọmentị anyị n'aka ndị ọrụ India. Bụrụ onye ọpụpụ anyị kwusiri ike ugbu a dị mfe. Ọrụ anyị bụ n'efu maka ndị ọkachamara ọhụrụ. Ị nwere ike buliteghachi n'okpuru na chọta ọrụ nrọ na UAE. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị India nwere nnukwu ohere na Dubai City.
Mgbe m tinyere ụlọ ọrụ gị, aga m enwe mmesi obi ike na a ga-enye ọrụ?. Azịza anyị bụ Ee, ọ bụrụhaala na ị zitere anyị ngwa gị. Otu n'ime ndị nnọchi anya gị ga-abịakwute gị na ozi na nkọwa. Oge ụfọdụ anyị kwesiri ịgwa gị okwu na Skype ma ọ bụ WhatsApp. Mana mgbe ngwa a gasịrị, ị nwere ike ịtụ anya ọrụ na Dubai dịka onye India.
Ị nwere ike ịnye ọrụ na Dubai si India?
Ee, ụlọ ọrụ anyị na-enyere ndị na-achọ ọrụ Indian aka ịchọta ọrụ na Emirates. Otu onye na - achị HR anyị na - enyere aka mgbe niile ịnweta a ọrụ ke Dubai maka Indian 12th pass yana ọrụ ndị Dubai maka ndị ọrụ Indian 10th pass. Yabụ, n'ozuzu ha, enwere ụlọ ọrụ Dubai City nke nwere nnukwu ohere maka ịchọta ọrụ na UAE. Ebumnuche anyị bụ inyere ndị ọrụ si India aka ịghọ otu n'ime ndị ọrụ na-ahụ maka ọrụ na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai.
Naanị nsogbu ndị otu anyị na - eche ihu bụ mgbe niile na - eche oke nsogbu na ntinye akwụkwọ. Ekwesịrị ime nke a n'akụkụ gị, na ị ga - abụrịrị 100% na ngwa gị mere n'ọrụ na nlebara anya siri ike na nkọwa na Dubai. Ndị otu anyị na-anwa ịkwanye ngwa gị ntakịrị ka ị tinye gị asap na kwụrụ ụgwọ ụgwọ kachasị mma.
A na-enwekarị ọkwa nke ọrụ na anyị nwere ike inye:
Ntinye larịị ( Studentsmụ akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ ) Erughi $ 3,000 rue $ 4,5000 kwa ọnwa.
Njikwa Ebe Ọchịchị (3 ruo 10 afọ) Ọ bụghị ihe na-erughị $ 5,000 kwa ọnwa, ụfọdụ ruru $ 8,000 - $ 11,000 kwa ọnwa n'enweghị ego.
Njikwa ndị okenye ga-enwerịrị ihe karịrị 8 afọ nke ahụmịhe azụmaahịa na azụmahịa Dubai, injinia ma ọ bụ njikwa otu ọfụma. Agesgwọ ụgwọ n'oge a karịrị $ 10,000 ruo $ 25,000 kwa ọnwa.
Ndi oru guru akwukwo, Ndị duziri, CFO, CEO nwere ike ịtụ anya karịa karịa $ 25,000 kwa ọnwa. Mana maka ọrụ ndị a, biko mee ka anyị mata na nzuzo.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-ele anya karịa nke ahụ, ụgwọ ọrụ ahụ wee bụrụ ụzọ dị ntakịrị maka gị. Biko mee ngwa gị na ụlọ ọrụ anyị n'ihi na Dubai nwere ihe niile. Mgbe ahụ, onye njikwa HR anyị ga-elele faịlụ gị ma nyere gị aka ịkwụ ụgwọ mmanya na ụgwọ ọrụ.
Achọrọ m ịnweta visa ịchọta ọrụ na UAE?
Ee e, otu isi ihe anyị na ụlọ ọrụ anyị nwere bụ ọrụ nrụgharị ọsọ na mfe. Yabụ, n'ikwu okwu n'ozuzu, anyị na ụlọ ọrụ anyị nwere ike ịnwe akwụkwọ ozi ọrụ mgbe ị na-anọdụ ala n'India. Ọtụtụ n'ime Ọrụ Dubai maka Indias enwere ike ijikwa n'ịntanetị. Yabụ, azịza gị abụghị, ụlọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka inweta ọrụ na United Arab Emirates. Otu n'ime mmejọ kacha njọ ndị otu HR anyị nwere ike ịhụ kwa ụbọchị bụ enweghị ahụmịhe. Dịka ọmụmaatụ, ndị India na-achọ ọrụ na ọbịbịa visa na UAE. Na erughị pasent abụọ Ohere inweta na icho oru a gha aburu iheoma.
Ya mere, otu esi enweta oru na Dubai dika onye India na ebe nlebara anya mgbe ahu? Etu, otu ụzọ maka ọrụ na Emirates bụ nanị idozi ihe niile. Ngwa izizi maka ọrụ, emesịa ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ga-ewepụta visa ha wee fega na-efe efe nwere ike gbaa akwụkwọ na na-abịa na Emirates n'ụzọ iwu.
Bulite CV na Dubai City Company
Pịa N'okpuru ebe a bụ 100% Guarantee!
Biko nyekwara ndị ọzọ aka ịchọta ọrụ na Dubai
Ọrụ na Dubai - Middle East ịkwaga ndu maka Expats
Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE, dịka eziokwu, bụ nnukwu ihe. Otú ọ dị, ịkwaga United Arab Emirates bụ nnukwu ma n'otu oge ahụ nhọrọ kacha mma. Obodo Dubai bụ ebe kachasị mma maka ndị India. N'ihe gbasara nyocha ọrụ maka ndị ga-eme egwuregwu site na India gaa Dubai bụ nhọrọ kacha mma. Ma, n'otu oge ahụ mgbe ị na-eme mkpebi iji gaa Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. A ghaghị ilele ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ n'ihu gị ọbụna zipu CV.
Mgbe nlezianya tụlee ọrụ na-akpọ UAE Gọọmenti Gọọmenti, biko lelee ya na ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndụmọdụ. N'aka nke ọzọ, ị ga-emerịrị ala maka ọnọdụ nke ohere a ọ bụghị mgbasa ozi na-adịghị. Ọzọkwa, ị nwere ike inweta aka ọrụ. Onye ọ bụla si India nwere ike tinye maka ọrụ Dubai. N'agbanyeghị ihe ị nụrụ, ọ bụrụ na ị mee ahia gị maka ọrụ na Dubai. Ị ga-eme ka ohere ị nweta akwụkwọ ozi.
Isi okwu ọzọ ị ghaghị ịma banyere ohere ọrụ maka ndị India nọ na UAE. Ọ bụ afọ ole na ole na-esote mba Gulf na-eweta ọrụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ? Ọmụmaatụ, Ngosipụta 2020 ọrụ na Fifa World Cup na Qatar bụ ohere na-eto eto na GCC. Ya mere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla ga-enwe ohere ịchọta ọrụ na mba Gulf.
Kedu ọrụ a na-arụ na Dubai maka India?
Otu ezigbo ihe ụlọ ọrụ Dubai City Company na-enye maka ndị ha na-achọ ime bụ nzaghachi ngwa ngwa. Ndị otu anyị na - ewe n'ọrụ, na - ekwu na - enwe ọrụ na - enye ọrụ n'ime otu izu. Mana oge kachasị ogologo anyị ji jikwaa bụ oge ọnwa 6. Ha niile dabere na ahụmịhe onye a na-eme. Ọzọkwa, nzukọ anyị kwesịrị ịdị njikere mgbe niile na a ga-enye akụkụ niile na mkpa dị ka arịrịọ ndị ahịa.
Anyị na-enyere ndị mmadụ aka chọta ọrụ na Dubai. N'eziokwu, anyị na-enyere visa na ịchọta ọrụ na Dubai ndụmọdụ. Ụlọ ọrụ anyị na-enyefe ọrụ nyocha ọrụ na Emirates. N'ihi ya, ndị India na-aga ime na India ga-aga Dubai. Anyị nọ ebe a iji chọpụta ọrụ dị omimi nke ọma na n'ime Dubai miri emi, ihe ọmụma UAE na-arụ ọrụ. Dabere na nke ahụ na-agbalị itinye ndị na-eme egwuregwu.
Ozi a ga-akwado gị maka ịrụ ọrụ ọrụ n'ime UAE. Ụlọ ọrụ anyị na-aghọwanye ewu ewu na-adabere na ọrụ ndị anyị na-enye ọrụ dị ịtụnanya maka ọrụ Dubai maka ndị India.
N'iburu nke a n'uche, anyị WhatsApp ekwentị mkpanaaka usoro nyeere aka ịme mba onye na-achọ ọrụ karịsịa si India. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ ndị isi ọrụ India na-arụ ọrụ na mpaghara Dubai. Na-enye ha nghọta miri emi banyere ọrụ ịkwụ ụgwọ na-enweghị ụtụ isi. N'iburu nke a n'uche, ịrụ ọrụ na Dubai na-eme ka ị gbanwee ibi ndụ na Middle East.
Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na-akọwa na UAE
Enwere otutu ebe India nwere ike icho oru. Citylọ ọrụ Dubai City na-ede blọọgụ ozi zuru ezu. Thezọ amamihe dị na ya bụ iji saịtị ọrụ jikọọ na expats ndị ọzọ. Ọzọkwa, enwere ụzọ ole na ole dị mma maka ndị njem India dịka ndị otu ọrụ na ohere iji kpọọ ndị ọzọ yana gbakwunye profaịlụ nke onwe gị na map Dubai na-emekọrịta ihe.
N'aka nke ọzọ, ị ga-elekwa ụlọ ọrụ nbanye na United Arab Emirates. Otu n'ime ihe kacha mma na UAE bụ a Onye a na - akpọ onye Careerjet na Ụlọ ọrụ ndị a maara nke ọma na India dị ka Osimiri Monster. Ha bara ezigbo uru itinye ya na CV gị. Ihe kariri ndi mmadu choro 100,000 na-edeba aha ebe ahu kwa ubochi, i kwesiri iguzo na ndu.
Mgbe ị na-achọ ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Shouldkwesịrị ilebara anyị anya ndị nduzi maka ndị mba ọzọ. Ọzọkwa ma na-ejide n'aka na ị ga-enweta ohere ị ga-eji nweta ndị India na-aga n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'ihi na Emirates abụghị ahịa dị mfe ịbanye ma ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo nduzi na Ozi.
Ọrụ maka India na UAE
Ị ga-ahụ ndụmọdụ bara uru maka ndị si India banyere arụ ọrụ na Dubai. Dịka ọmụmaatụ, ị kwesịrị ịmara ozi nzuzo na ahia azụmahịa na Middle East. Tụkwasị na nke a, ị kwesịrị ịmara ozi gbasara ebe obibi dị iche iche esi enweta oru na Dubai ngwa ngwa site na iji igwe.
Site na otu aka ahụ na ihe ọmụma bara uru na ụlọ akwụkwọ maka ụmụ gị. Tinyere ozi gbasara akụ na ụba, na ihe oriri ntụrụndụ ndị dị mkpa dị ka mgbatị na ahụike. Ọ bụghị ịkọwapụta ozi a na-enye na ụfọdụ saịtị ahụ abụghị ozi enyemaka. Ị ga-eji naanị ya ebe kachasị mma maka ọrụ Dubai.
Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ anyị bụ ụzọ kachasị mma iji mee ihe ọrụ nbanye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ adịghị enye ọrụ dị otú ahụ. Tụkwasị na nke a, ụlọ ọrụ Dubai City Company na-eme ụbọchị 60 maka ọrụ ọ bụla gbasara nyocha ọrụ nkwụ ụgwọ. N'ikwu okwu ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ anyị na-enyere aka Ndị India na-achọ ọrụ na iji ọrụ anyị na Dubai maka ndị India ọrụ.
Lelee anya ohere ohere maka ndị India nọ na UAE
Ịkwaga United Arab Emirates na ụlọ ọrụ Dubai City. Ihe dị ịtụnanya na nke ọma Usoro ndughari nke Middle East ị nwere ike ịchọta na bọtịnụ Dubai anyị.
Nke ahụ bụ ikwu na afọ ndị gara aga, dị ka ihe atụ, nke United Arab Emirates ahịa oru agbanweela site n'aka ndị na-ahụ maka ndị na-esite n'èzí gaa ebe dị iche iche na ebe obibi nke ọtụtụ ndị ọkachamara n'Ọdịda Anyanwụ Ụwa. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, na UAE bu nke Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah na Umm al-Quwain. Ụlọ ahịa azụmahịa abụọ nke Abu Dhabi na Dubai na-enye ọmarịcha lifestyles na ezigbo ọrụ ohere.
Site na ebumnuche a, United Arab Emirates bụ obodo na-ekwo ekwo, ụwa nke mbụ obodo nke nwere ndọrọndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze ogologo oge maka onye India. Na olile anya na o nwere oke ndi mmadu guru akwukwo, nke guru akwukwo, na otutu ndị ọkachamara ọkachamara si India, na nkwukọrịta mara mma jikọrọ aka na mpaghara ahụ na ebe ndị ọzọ na-enye ego. Imirikiti ihe àmà maka Ụmụ India na Dubai nwere ihe edere ederede nke ihe karịrị afọ 30 nke ịkwalite ọrụ azụmahịa dị egwu dị ka nkà na ụzụ, ahia, egwuregwu, njem, na nlegharị nche.
Gịnị mere ị ga-eji gaa Dubai?
N'ebe dị mma, na Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE nwere ihe enweghị usoro ihu ọha maka azụmahịa, site na ụfọdụ ụtụ isi kachasị mma na mkpali akụ na ụba ndị ọzọ n'ebe ọ bụla n'ụwa. Ekwesịrị icheta na Dubai City nwere ohere ọrụ dị elu. Ma nke kacha mma maka ọrụ nkuzi maka ndị India.
Iji gosipụta ọnọdụ ndụ dị mma maka ndị Indians na-eme ka ọ bụrụ ebe a ma ama ịchọta maka ụlọ ọrụ achụmnta ego na ezinụlọ ha. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ndị India bi n'èzí na-ebuli ngwa ngwa. Ya mere, ọ bara uru ịkwaga Dubai.
Isi ihe ozo: n’ime UAE, o nwere ike ị ga - enweta ezigbo ngbanwe n’etiti ndị mmadụ ị na - ezute India. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụ naanị 11% nke ndị bi bụ ụmụ amaala, ihe dị ka 21% bụ ndị Arab n'ihi ngbanwe nke ndị ọrụ ụwa na-achọ Dubai. Site na mba ndị ọzọ, 57% bụ ndị South Asians na ndị fọdụrụ na 11% bụ East Asians na Westerners. Ezi ọdịdị nke ọdịbendị, asụsụ, na okpukpe dị iche iche dị, ndị na-ekpo ọkụ si mba dịgasị iche iche na-ejuputa ọdịiche nkà na ọkwa ọ bụla.
N'ihi nke a, anyị na-agbalị igosi gị ụzọ maka narụ ọrụ na Dubai. N'ebe na-ezighi ezi nke ndụmọdụ anyị maka ndị na-ere ahịa, ọrụ ịchọ na Dubai bụ ogologo oge. Mana ihe mbụ ị ga-echeta na anyị ga-anwa ime ka nke ahụ dịkwuoro gị mfe. Ya mere, ọtụtụ ihe àmà kachasị ike ga-enyere gị aka ijide ekwentị mkpanaka ezumike na Dubai. Ọ bụ mgbasa ozi na Dubai.
Dịka ọmụmaatụ, ohere ọrụ maka ndị India nọ na UAE na ịchọ ọrụ na Gulf. Bụ nrọ maka ha. Naanị dokwuo anya ngwa kachasị mma a ga-etinye n’isi obodo Emirate WhatsApp Otu na Gulf na dum United Arab Emirates
Gịnị ma ị gafee Abu Dhabi?
Enwere isi ole na ole ihe mere ị ga - eji kwaga n'isi obodo karịa Abu Dhabi. Dịka ọmụmaatụ n'isi obodo Emirates na-eto mgbe niile, a na-etinye akwụkwọ nkwekọrịta ọhụrụ ebe ahụ kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, ọbụnadị Linkedin na Facebook emepere ụlọ ọrụ ebe ahụ. N'akụkụ aka nke ọzọ, Abu Dhabi bu ezigbo ebe maka ndị isi ụgbọ ala, ndị injinia na ndị ọrụ mmanụ na gas. Yabụ, n'ozuzu ikwu okwu, ọ dabere na ahụmịhe na ọnọdụ gị.
Obodo Abu Dhabi dị mma maka ezigbo ndị kwụsiri ike. Onye nwere ezinụlọ na aka ya. N'ihi na enwere mkpọsa mara mma na mkpọpụta dị ole na ole. Enwere ohere ohuru mgbe niile na Abu Dhabi, mana a ghaghi icheta na obodo a nwere usoro ya na ndi Ochichi dikwa n ’azu ahia. Companylọ ọrụ anyị na-adụ ndị obodo ọdụ mgbe niile maka na ha bụ otu maka ọdịnihu careers dị ka CEO na ohere ọrụ ọrụ CFO.
Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE
Mmefu ego na Dubai: Maka onye nwere mmetụta nke chọrọ a ọrụ na Dubai. Ihe a na-elegharakarị anya bụ nanị ịga naanị. N'ezie, ọ ga-ekwe omume ibi ndụ dị ala dịka ndụ ọrụ maka 6500AED. Ọ bụghị banyere mmefu njem na ugbua ugwo ịbịa Dubai. N'ihi ya, ọ bụ ìhè nke ndụ dị ala Dubai, ịkwesịrị ịgụnye ụgwọ nke ịgbazite na Mpaghara Dubai naanị njem na oge gị n'ebe ọrụ gị. Tinyere mmanụ ụgbọ ala maka ụgbọ ala gị, mkpuchi ụgbọ ala, na ụgwọ mmezi na ụgwọ akwụ ụgwọ maka ụgbọ ala.
Nhọrọ dị mma ịmalite ịmalite ọrụ ibu ngwa ngwa bụ achọ ebe ọrụ ugbo na UAE. Site n'ụdị ọrụ a, ị ga-enwe ohere ịnweta ụgbọala na-akwụ ụgwọ na ịnya ụgbọ ala n'ebe ọrụ gị. N'ebe dị mma, ị ga-akwụ naanị maka mmanụ ala na mkpuchi.
N'ezie, enwere nnukwu ọdịiche n'etiti ndị India na mba ndị ọzọ. Ọmụmaatụ, Ndị ọrụ Filino na-akwaga Dubai. Ha na-ebikwa n'ebe a dị ịtụnanya. Ma ihe ka ọtụtụ n'ime ha adịghị ebi dị ka onye India. Ha na-akwụ ụgwọ dị ala karị. Ọtụtụ n'ime ha anaghị enweta ezigbo ọrụ na ọrụ nyocha ọrụ na UAE.
Anyị na-enyere ndị na-akwụ ụgwọ aka maka ohere maka ndị India nọ na UAE.
Ọ nwere ya bi na Dubai?
Ego ụlọ na mmiri, eletrik, ekwentị iji nwee ike iso ndị enyi kparịta ụka, N'ezie, ịntanetị, Ọzọkwa, nri, na ngwa ahịa ọzọ ma ọ bụ ọbụna ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ site n'oge ruo n'oge. Na mgbakwunye, enwere ike ijikọ gị na ezinụlọ / ndị a tụkwasịrị obi ga-achọ ịnọnyere gị na Dubai. N'akụkụ ego ị na-emefu, ịkwesịrị ịgbakwunye AED 2000 maka onye ọ bụla nọ na Dubai. N’emeghị ka mba ndị ọzọ, ndị ọrụ ọrụ ọkọlọtọ na-adị ọnụ ala. Ka osi di, na onodu ezigbo ugwo na Dubai, inwere ike iku ego oru ọrụ oge oge na Dubai site na ụfọdụ n'ime obodo Ụlọ ọrụ Dubai ma ọ bụrụ na ịchọrọ idebe ụlọ gị.
Ihe ndi oru India na UAE ghọrọ nhọrọ ọhụụ dị ịtụnanya maka ndị si mba ọzọ. Yabụ agbanyeghị ọnọdụ ị na-achọ ugbu a inweta. Companylọ ọrụ Dubai City na-agbasi mbọ ike iji nye ozi gị nke ọma. Ọzọkwa, anyị na-ejikwa blọọgụ anyị maka ndị na-achụ nta ọrụ Asia ebe ndị ọhụrụ na-aga ọhụrụ nwere ike ịchọta ozi bara uru dị ukwuu gbasara usoro ịbanye maka Dubai na Abu Dhabi.
ọrụ Ohere maka India na UAE
Chọpụta ihe achọrọ maka ọrụ na Dubai maka India!
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu anyị ụlọ ọrụ na Dubai gosipụta ihe kacha mma ị ga-akwụ na United Arab Emirates maka nwanyị. N'otu oge ahụ, anyị na-anwa ịnweta isi nke ọnụọgụ ọnọdụ na Dubai City. Anyị na ha na-arụ ọrụ mgbe niile kuziri oru na Dubai na IT ọrụ na Dubai. Dịka anyị chọrọ ka ị nweta ohere ọrụ na Dubai, anyị kwesịrị ilekọta profaịlụ nke ndị ọrụ ị chọrọ.
N’aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ Dubai City na-anwale mgbe niile iji nweta uzo di elu maka ọrụ ọrụ na Dubai. Ya mere, anyi na-agbali itinye ya iche Ịbanye na Dubai ma na-eme ka ndị isi India na-enwe obi ụtọ na ọrụ ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Inweta ohere ọrụ site na ndị ọrụ nchịkọta
Ihe ọzọ dị mkpa bụ Ụlọ ọrụ nchịkọta ụwa maka ndị na-ekpo ọkụ ha na-edebe ihe ha chọrọ ka ha soro ndị na-achọ ọrụ na Dubai. N'akụkụ aka nke ọzọ, Dubai City Ụlọ ọrụ kama ịgafe ọrụ dị mfe. Na-ejikọta ndị na-achụ nta ọrụ mgbe niile na ndị mmadụ dị mkpa dịka ndị isi, ndị ọrụ nchịkọta, na onye nchịkwa ụgwọ ọrụ.
Ọzọkwa, ike ihe omume ọ bụla doro anya anyị na - esite na isi iyi dị iche iche esite na ha ruo Pakistan. Yabụ na nke mbụ, ị ga-eru nke kacha mma Ndị na-ewe ndị ọrụ na Dubai, iji mee nke ahụ, n'ezie, Google ọ maka Career na Dubai ma gbalịa chọta top recruiters na Dubai na Abu Dhabi.
Dịka eziokwu, ndị ọrụ nchịkwa na-enweghị obi abụọ ga-adị na Google maka Ọrụ. Ọzọkwa ị nwere ike ịchọ mba ụwa ụlọ ọrụ nbanye na Mumbai, ma ọ bụ ndị isi obodo na Hyderabad bụ ndị na-arụ ọrụ na UAE nwere ike inyere gị aka ọrụ ịntanetị na Dubai. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ Dubai bụ ndị ọkachamara na ịchọta ndị nwere nkà na India na ndị nwere mmeri nwere ahụmahụ ma tinye ha dịka ọmụmaatụ maka ego ọrụ na Dubai ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ arụ ọrụ.
N'oge na-adịghị anya ị dịka onye na-achọ ọrụ na UAE. O doro anya na ị ga-eji nwayọọ na-aga agha ọrụ na Emirates ya na profaịlụ di iche. Iji maa atụ, ọrụ na họtel na Dubai bụ ezigbo ụzọ. N'oge a, ị ga-alụ ọgụ maka ọrụ nchekwa na Dubai kesara ụlọ ọrụ anyị na LinkedIn. Ma n'ikpeazụ ọrụ ịkwọ ụgbọala na Dubai n'ihi na ha dị mfe ịnweta. Mgbe ahụ, lelee ndị na-atụ anya na ị ga-enwerịrị ike ịchọta ọnụ ọgụgụ nyocha. Ọrụ Dubai na-akwụ ụgwọ ndị njikwa na United Arab Emirates na-achọkarị ndị ọhụụ si India. O doro anya na ichikota na ha dị mfe ịchọta na Dubai na oge niile dị njikere ịrụsi ọrụ ike maka ụgwọ ọrụ na-enweghị atụ.
Ọfọn, ịmalite, ị si India na ọtụtụ ndị na-ekpo ọkụ si Asia. N'ihi ya, a na-akọwa ya n'ụzọ dị mkpirikpi ma nwee ọgụgụ isi, dị ka nkà, ma dịka ndị ọzọ na-atụgharị uche. Anyị rụzuru ọtụtụ ihe nhazi si India ka Dubai. Dịka okwu nke eziokwu, anyị kwenyesiri ike na ọ bụ mgbe niile ka anyị na-anapụta ọrụ dị iche iche nke nchịkọta maka ndị ahịa anyị si Asia. Ọ bụghị ịkọwa maka na anyị dị oke mkpa bụ ịmechi ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke ọnọdụ obodo Dubai dị na 60 a na-enweghị mgbagha ruo oge 90 oge. N'ezie, ụlọ ọrụ anyị na UAE na-agbali mbọ ebe ndi India choro ndi choro naanị maka ọrụ ọhụrụ na Dubai.
Gịnị mere Ọrụ na Dubai maka India ji bụrụ ndị na-ewu ewu?
Malite Ọrụ ma nweta nnukwu ihe ịga nke ọma na UAE
Dubai bụ nke ndị ọrụ mba ụwa na-achọ dị ka ebe kachasị elu nke ịbọrọ onwe ya ọbọ na arụ ọrụ na nchịkọta maka ọrụ na UAE. N'ihi nke a kwa ọnwa enwere ọtụtụ ndị isi site na India biara maka ahia ọrụ na Dubai. Maka ihe dị mkpa iji ghọta na nkwụnye ego nwere ike inyere gị aka ịme ego na United Arab Emirates.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, Dubai na-aghọ otu n'ime obodo kachasị ọnụ na ọgaranya n'ụwa. Ikwu ọrụ n'ozuzu na Dubai maka India ebe ọtụtụ ndị Asia nọ na ndụ ndụ ndụ. Dị ka e kwuru mgbe ị gara UAE bụ mba jupụtara na ndị bara ọgaranya.
N'otu oge ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-ama ebe ị ga-esi merie gị, a ga-enye gị ọrụ dị mfe maka ọrụ na Dubai maka freshers. N'ikpeazụ, ị ga - ejikọta na ọtụtụ ndị bara ọgaranya bụ ndị nwere ike inyere gị aka achọ ọrụ Dubai.
N'oge na-adịghị anya ma ọ bụrụ na ị ga - abụ onye na - enwerịrị onye na - arụ ọrụ na ebe ị ga - amalite ibi ndụ ndụ. Ọ bụrụhaala na obodo Dubai na-ejide ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke skyscrapers. Site na mgbe ndi okpo ahia tinyere obodo ndi mara mma maka ohere ọrụ. Mgbe ufodu ulo ulo na ịzụ ahịa dịka ọrụ dị na UAE.
Mgbe ahụ, ọrụ na obodo ma ị ga-ekwe omume. Na agbakwunyere, a na-ekwupụtakwa ebe a dị ịtụnanya dịka otu n'ime ebe ndị ahịa kachasị mma maka nwunye gị n'ụwa. Ị ga-ama na mgbe ị na-abịa ebe ahụ, ị ​​na-amalite ime ego. Ya mere, na etiti nke ịchọ maka ọrụ Abu Dhabi na Dubai ka anyị nwee anya na ndụ na ọrụ dị na Middle East.
Ọrụ na UAE maka India ma ọ dịghị onye na-ahụ ọrụ?
Onye ọ bụla nke na-achọ ọrụ na mbụ bu n'uche bụ Dubai. N'eziokwu, e nwekwara Abu Dhabi ebe ị na-achọ onye na-achọ ọrụ kwesịrị ịkụ. Kwa India na UAE n'eziokwu na-achọ mgbanwe nke ọrụ. Ya mere n'otu oge ahụ abiala maka ịchụ nta n'ịchụ nta na United Arab Emirates gara leta visa. N'ikwu eziokwu, ọtụtụ ndị Indians kwuru na ha ga-enweta ọrụ na visa nleta. The 7th Emirates na-achọ ụdị ọrụ ọ bụla, site na onye ọ bụla ahụmahụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ.
Thezọ kachasị mfe iji nweta ọrụ na Dubai bụ ịmalite na ọkwa dị ala. N'ihi na a na-ekwesighi ka ọrụ nchịkwa dị ọtụtụ na UAE. Agaghị akpọsa ọtụtụ ndị ama ama ama na ọrụ na-enye. Onyinye ma di kwa ososo forzọ ọ bụla maka ndị anaghị enwe nsogbu bụ inweta ọrụ dị ala.
Maka nzube nke ịchọta ọrụ DUBAI OBODO: Ndị India bụ ndị na-abịa UAE. Na karịsịa achọ ọrụ ụlọ ọrụ na Middle East, ọ bụghị naanị Emirates. Agatụghị eleta visas karịa ihe niile. N'iburu nke a n'uche, onye ọrụ ọ bụla nke India ga-enyocha ọrụ ha na-arụ na visa ọrụ na Dubai. Dabere na nke ahụ ndị India si abịa na olile anya na ikike ụlọ ọrụ ga-enye ikike visa. Maka otu ihe, mee ya nke ọma ma tupu gị abata n'obodo ahụ gbalịa inweta akwụkwọ nlekọta ọrụ na UAE. Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, ọbụna ndị ụkọchukwu Indian na Emirates ekwuola na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke nkwụsị ọhụrụ onye na-achọ ọrụ ụwa na atụmatụ nke aghụghọ nke visa.
Ọrụ na Dubai na Visa maka India
Dị ka ọmụmaatụ, na ndụmọdụ 2018 Gọọmentị Govim na-esote ọnụ ọgụgụ dị elu nke visa frauds. N'ikwu okwu n'ozuzu, oku na ịga leta ndị India na-abụ ndị a na-ahụ maka njedebe ikpeazụ ịchọ ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị Asia na-achọ ọrụ kwesịrị ikwurịta ya na consulate ahụ. N'ihi na e nwere ọtụtụ ndị ọzọ Ndị ọrụ India bụ ndị na-eme ka ndị ọrụ na-elekọta mmadụ ma ọ bụ ndị ọrụ na-emekọ ihe mgbe niile. N'oge na-adịghị anya ndị ọrụ Ahia anaghị enweta ọrụ ma ọ bụ akwụ ụgwọ ha akwụ.
Ruo ugbu a, UAE nwere nnukwu nsogbu na Visa maka India. Site n'oge ruo n'oge, ndị na-achọ ọrụ site na Mumbai kwere nkwa ụfọdụ ọrụ ahịa dị mma na Abu Dhabi ma na mberede, enwetaghị ihe ọ bụla na nloghachi. Ma n'azụ ya mgbe a gwara onye ọrụ ahụ ka ọ rụọ ọrụ dị ka ndị ọrụ maka ụgwọ ọrụ kachasị elu na saịtị ebe ọ na-ewu ihe, mgbe ahụ ọ gbakwụnyere na ọ ga-emekwu ego na India. Ị nwekwara ike isonyere ọrụ ọrụ anyị maka Pakistani ọrụ na Dubai naanị iji nweta ọhụụ doro anya. Kedu mba ndị ọzọ na-ejikwa oge ọrụ. Ọbụna esi achọta ọrụ na Saudi Arabia na ọtụtụ ozi na nkwekọrịta ndụmọdụ.
Ruo ugbu a na ọkara mbụ nke 2017, ndị isi India natara akụkọ site na UAE. Na-ekwu na na njedebe ikpeazụ, ngụkọta nke mkpesa 540 maka ndị India na-edozi na UAE ma ha nwetara ọrụ na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai City. N'akụkụ dị mma, akụkọ ahụ kwuru na Ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ mmiri na UAE obi dị ezigbo ụtọ mgbe ha nwetara ezigbo ego ọrụ na ụlọ akụ na Dubai ma ọ bụ India.
Ọrụ kacha mma na Dubai City?
Isi ihe ọzọ anyị ga - achọ ikpughe gị bụ ọrụ kacha mma na Dubai City na Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE. Kinddị ọrụ a karịrị aha ama !. CFO na ohere ọrụ dị ka maka ndị mbịambịa nke Asia. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ahụmịhe na agụmakwụkwọ nke ọma n'ogo ogo dị elu.
Ụlọ ọrụ Dubai City Nyocha maka ụgwọ ọrụ na Dubai na Abi Dhabi ruru karịa utu aha 300. N'okwu a, ọrụ ndị isi na UAE bụ ndị kachasị mma iji nweta ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ị ga-achọpụta ụdị ọrụ kacha akwụ ụgwọ ma gbalịa ịbụ onye ọhụrụ onye na-ede nrọ site na South Africa. N'okpuru ọnọdụ ndị a, a na-echebara otu akụkụ echiche nke ọma. Mgbe ị na-ahọrọ ịmalite ọrụ nrọ ọhụrụ na UAE.
Isi nlebara anya ị kwesịrị na-elekwasịnụ anya na enwere ihe enwere ụgwọ ọrụ na obere ọrụ ego na enwere m ike ịchọ ohere ọzọ. N'akụkụ na-adịghị mma bụ njirimara nke ọrụ mmeghari ma ọ bụ njikwa m? Ọ na-enye atụmanya uto dị mma yana yana enwere ike ịnweta ego ụtụ isi ka mma? Ma ọ bụ ọ ga - eme ka m were ọtụtụ ego n'aka? Yabụ lee anya Enyemaka Ndị Ọrụ Maka Ndị India na UAE na Ọwara Mmiri na ihe nhọrọ kacha mma.
Ebe kachasị elu ọrụ na Dubai maka India
Onye kachasị mma bụ onye isi ọrụ nlekọta ọrụ na Dubai
Nkezi kwa ọnwa kwụ ụgwọ na ìhè nke ịtụ ụgwọ ezumike nká: Dh120,000
Tinyere ụgwọ ọrụ: Dh65,000 ka Dh145,000
Dịka eziokwu, ọkachamara n'ịzụ ahịa na-arụ ọrụ
Na-ekwu ihe ọ bụla nke nkezi kwa ọnwa ụgwọ gụnyere ezumike nká: Dh85,000
Ọnụahịa ụgwọ ọnụ yiri nke a: Dh60,000 ka Dh100,000
Ndị na-arụ ọrụ ọnụ na ndị ọrụ ego na-arụ ọrụ na UAE
Ya na oru ndi ozo kachasi nma na ndi ozo n’enwe ego ozo kwa ọnwa tinyere ego ezumike nka: Dh75,000
Ọnụahịa ụgwọ ọnụ yiri nke a: Dh55,000 ka Dh90,000
Tụkwasị na nke a, ndị isi ụlọ akụ na ọnụahịa kwa ọnwa gụnyere ụgwọ ezumike nká: Dh70,000
A na nke a n'uche na ha nwere ụgwọ ụgwọ: Dh53,750 ka Dh99,500
Jikọtara na ịtụnanya ego ego Lawyers ọrụ Dubai
Ọzọkwa, ọrụ siri ike iji nweta UAE dika India na nkezi ụgwọ kwa ọnwa tinyere ụgwọ ezumike nká: Dh67,000
Ọnụahịa ụgwọ ọnụ yiri nke a: Dh60,000 ka Dh116,000
Kwụsị ọrụ siri ike ịmalite, ma na-enye ọtụtụ ohere
Ọ bụghị ịkọ banyere ndị dọkịta na United Arab Emirates
Nkezi ụgwọ ọnwa tinyere ụgwọ ezumike nká: Dh70,460
Tinyere ndị ọzọ arụ ọrụ Gulf kachasị elu Doctor Salary na-eche: Dh70,000 ka Dh220,000
Ụgwọ ụgwọ dị mkpa na Ndị ọkà mmụta sayensị ọkachamara, ọ bụghị ịkọtara isi nke obstetrics na gynecology, dịka ụmụaka na-ahụ maka ndị ọkà mmụta sayensị / ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị dọkịta na-awa ahụ.
Ị dị njikere ịkwaga si India gaa Dubai?
Enwere ndị chọrọ akwụkwọ 600,000 ọhụrụ na nchekwa data anyị. Kwa ụbọchị ọrụ ọhụụ na Dubai maka ndị expires India na-asọba na webụsaịtị anyị. Companylọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ndị na - eso ụzọ obi ụtọ na ndị na - achọ ọrụ ọhụụ ọ bụghị naanị site na India. N'ihi na anyị kwenyere na mmadụ niile kwesịrị inwe a Ohere iji gosi maka ahịa kacha dị n'ụwa.
Anyị emeela ụlọ ọrụ dị iche iche na ụlọ ahịa Dubai. Ruo ugbu a, anyị enyerela aka karịa ndị 1,400,000 ọbịa si India. Dịka e kwuru maka ọrụ anyị na-emeghe mgbe ọ kachasị gị mma, mgbe niile 7 ụbọchị n'izu. N'ikpeazụ, ị nwere ike ịbanye na ụlọ ọrụ anyị na-enweghị ọrụ ma ọ bụrụ na anyị agaghị eme ya.
N'otu oge ahụ, ị ​​nwere ike ịgagharị na arụ ọrụ nyocha ọrụ. Na-ekwukarị gbasara ịchọ ọrụ ndị India, anyị kacha mma n’ihe anyị na-eme. Na nyocha nke ikpeazụ, anyị na-eche gị ka ị banye na United Arab Emirates. N’ezie ị nwere ike nweta ezigbo ozi bara uru n’aka ndị otu anyị ndị ọzọ. Can nwere ike ịga na ngalaba Ndị otu ma jikọta ya na ọtụtụ puku ndị si mba ọzọ.
Na-arụ ọrụ na ọnọdụ CEO dị ka ndị njem India
Ị ma na e nwere ọtụtụ Onye isi ochichi India arụ ọrụ na Emirates? Dịka ọmụmaatụ, ọrụ Google na Dubai dị ugbu a maka ndị na-achọ ọrụ ụwa. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, ọhụụ ọhụrụ maka ndị India nọ na UAE bụ ụzọ meghere. A na-anabatakarị ndị na-agba India na Emirates. Otu nnukwu òtù na-akwụ ndị ọhụrụ si India kwa ụbọchị.
Ihe omuma atu nke ndi ozo n'enye ndi isi na Asia bu WhatsApp. N'ime ụlọ ọrụ a, ndị isi ndị Asia na-arụ ọrụ na ọkwa dị elu, karịsịa na ngalaba IT. Ihe dị mkpa iji ghọta bụ na ụlọ ọrụ anyị na-akwụ ụgwọ na WhatsApp. Yabụ ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ahụmihe ahụmihe ị nwere ike ịchọta ọrụ na ụlọ ọrụ Dubai City. N'akụkụ na-adịghị mma, anyị anaghị enye onye isi ma ọ bụ ọkwa nchịkwa ọkwa n'ihi na anyị eburularị ndị isi nchịkwa banye azụmahịa ahụ.
Ohere ọrụ maka ndị India na UAE - Ha bụ maka gị na Dubai.
Ugbu a bụ oge maka nkwubi okwu bara ezigbo uru ịchọ ọrụ na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai ?.
Ọ bara uru iji nweta ọrụ na Dubai dịka onye India?
Dubai, nke a bụ mgbasa ozi kachasị na TV. Enwere ugbu a otutu oru ohuru ohuru na abia n’ogbe oke osimiri. Ọzọkwa, Saudi Arabia emeela ụfọdụ ihe mgbochi maka ndị India na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ Saudi. N'aka nke ọzọ, Qatar anaghị enye ihe ọ bụla karịa afọ nkwekọrịta 2-3 afọ. Yabụ, dị ka nhọrọ amamihe dị na ụlọ ọrụ anyị na-adụ ọdụ Emirates. Onwere ihe kariri oru ohuru nke 30,000 agbakwunyere na otutu uzo iru oru na ndi ohuru ndi ohuru nke ndi isi obodo Emirates.
Ihe omuma ozo nke kwesiri ime ka ị kwenye oru na Dubai bu ego ndi India na UAE. Enwere ọtụtụ nde ndị India si mba ofesi deba aha na Dubai na Abu Dhabi. Ihe a gha enyere gi aka na mkpebi gi. N'ihi na ma ọ bụrụ na ọtụtụ nde mmadụ jisiri ike nweta ndụ mara mma na UAE. Should ga-ewere onwe gị ka onye bara uru maka ezigbo ọrụ.
Mụ na ụlọ ọrụ Dubai City, ị nwere ike ijide n'aka na mgbe ị na-etinye ihe netwọk mmekọrịta anyị. A ga-enye gị ohere maka ọrụ ọ bụla maka ndị India nọ na UAE mgbe nile ka ha ga-enwe ike ịnweta ya ma mee ka ndị ọrụ anyị.
Mmechi maka onye India ọ bụla na-achọ ọrụ na Dubai
Anyị na-eche na na ozi niile ị nwere ihe ọmụma zuru ezu gbasara ahia ahia na Emirates. Ya mere, dị ka eziokwu, ị si India na ịchọ ọrụ na Dubai dị mkpa ịghọta na ịbịakwute ya abụghị ihe dị mfe ime.
N'ebe dị mma, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka, anyị na-achịkwa a WhatsApp Ndị otu maka ndị ọrụ. Njikọ njikọ Linkedin na ndị ọrụ nchịkọta ndị ọrụ, pụrụ iche na-ebuteghachi na nhọrọ Dubai. N'iburu nke a n'uche ịchọta ọrụ site na India ruo United Arab Emirates kwesịrị ịdịrịrị mfe.
Dabere na ahụmahụ Dubai City Company. Dị ka ihe atụ nke ọrụ na ịchọ ọrụ na Middle East, anyị nwere ịnye ụgwọ ọrụ na ndụmọdụ Dubai, Fim, na ụfọdụ n'ime ndụmọdụ maka ịchọta ọrụ na UAE ma ọ bụrụ na ị si India.
Iji tinye ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-anwa ịme ka onye ọ bụla si India bịa ma mee ha ka ha bụrụ ezigbo ndị ọrụ na United Arab Emirates. N'ikwu okwu n'ozuzu, mgbe niile chọpụta nlekọta na MBA ma zọpụta ọchụchọ gị na akwụkwọ ma ọ bụ laptọọpụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ gị n'ọdịnihu ga-anwa ịkpọ oku ị nwere ọrụ.
Anyị nwere olile anya ịhụ onye India ọhụụ ka ọ na-eje ije na ama nke ụdị ndụ kacha mma na nrọ Arabic. Anyị na-enwe enwe olileanya na nke ahụ ga - adịrị gị!. Achọrọ m gị ezigbo chi ma nwee olileanya na ị ga-eji ụlọ ọrụ Dubai rụ ngwa gị.